२४ घण्टामा २४४४ जनामा कोरोना संक्रमण, ४२ जनाको मृत्यु Canada Nepal
२४ घण्टामा २४४४ जनामा कोरोना संक्रमण, ४२ जनाको मृत्यु
क्यानाडा नेपाल आषाढ १४ २०७८
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर २ हजार ४४४ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार अपरान्ह दिएको जानकारीअनुसार मुलुकभर गरिएको कूल ११ हजार ६४० परीक्षण गर्दा २ हजार ४४४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो ।
६ हजार ६४८ पीसीआर परीक्षण गर्दा एक हजार ५०९ जनामा र ४ हजार ९९२ एन्टिजेन परीक्षणमा ९३५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ८५३ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने सोही अवधिमा ४२ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार ५१ पुगेको छ ।
आषाढ १४, २०७८ सोमवार १७:१३:४९ बजे : प्रकाशित
खैनी, गुट्खा खानेहरुलाई ५ महिना मै मुखको क्यान्सर देखियो : डा. प्रकाश बुढाथोकी
काठमाडौं । विज्ञानले सफलता हात पारिसक्दा पनि मानिसहरु क्यान्सर भन्नसाथ मृत्युको पर्यायवाचीको शब्दको रुपमा अझै लिने गर्छन् । तर, अहिले समयक्रम सँगै विभिन्न प्रविधि र उपायको विकास भएको छ। त्यसकारण अहिले क्यान्सरको समयमै उपचार गर्न सकिए निको पार्न सकिन्छ। शरीरको कुनै पनि तन्तु वा कोषहरु अस्वाभाविक, असमाजस्य र अनियन्त्रित किसिमले बढ्दै जानु नै क्यान्सर हो । जस्तै गालामा कुनै घाउ भयो वा कुनै डल्लो आयो र घाउ वा डल्लो गालाकै तन्तु वा कोषसँग सामजस्य भएन र ठुलो हुँदै बढ्दै गयो भने त्यसलाई गालाको क्यान्सर भनिन्छ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा गालाबाट कुनै मासुकोको नमुना वा बायोप्सी लिएर हेर्दा गालाको कोषसँग हुनुपर्ने सामान्य गुण वा आकारसँग मिलेन भने त्यसलाई गालाको क्यान्सर भनिन्छ। गालामा भयो भने गालाको क्यान्सर, जिब्रोमा भयो भने जिब्रोको क्यान्सर भनिने स्वास्थ्य सेवा विभागको आँखा, नाक, कान, घाँटी र मुख स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् ।
मुख भन्नसाथ ओठभन्दा भित्र र च्यापुभन्दा माथिको भागलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात, लिप्स्टिक वा चिप्स्टिक लगाउने भाग भन्दा भित्र र पानी पिउँदा क्लुक क्लुक गर्ने भाग भन्दा माथिको भागलाई मुख भनिन्छ। जसअन्तर्गत, ओठ, गाला, जिब्रो, गिजा, जिब्रो मुनिको भाग, तालु, च्यापु पर्छन्। त्यसकारण, यी भागमा भएको कुनै पनि क्यान्सर, चाहें त्यो जिब्रो, गाला वा अन्य कुनै भागमा भएका क्यान्सरलाई मुखको क्यान्सर भनिन्छ।
मुखको क्यान्सरमा २ प्रतिशत मात्र वंशाणुगत हुने गर्दछ। बाँकी ९८ प्रतिशत आनीबानी , जीवनशैली, खानपान, रहनसहनले हुने डा. बुढाथोकीले बताए।
अहिले देखिएको ९० प्रतिशत मुखको क्यान्सर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट भएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ धुवाँको रुपमा, धुँवारहित, बाफ, लेपन गर्ने खालको पनि हुने तथा चपाउने पनि हुन सक्छ। धुँवा भन्दापनि धुँवा रहितका सुर्तीजन्य पदार्थ बढी जोखिम हुने उनले बताए। जसमा, मुखमै राख्ने, च्याप्ने सुर्तीजन्य पदार्थहरु जस्तै खैनी, गुट्खा, गुलहरु पर्दछन्।
सामान्यतया चुरोट, बिँडी खानेहरुमा १० देखि १५ वर्षको अन्तरालमा क्यान्सर देखिन सक्छ भने खैनी, गुट्खा तथा अन्य चपाउने वा च्याप्ने पदार्थले ३ देखि ५ महिना मै पनि क्यान्सर भएको भेटिएको डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए। किनभने, यसमा तन्तु वा कोषहरु प्रत्यक्षरुपमा सम्पर्कमा आउँछन्। र उक्त ठाउँका कोष वा तन्तुहरु इरीटेट हुन्छन् र त्यसठाउँमा घाउ हुन्छ र यसले क्यान्सरको रुप लिने गर्दछ।
के हो मुखको क्यान्सर, कसरी हुन्छ, यसको उपचार विधि कस्तो छ र निको हुने सम्भावना र प्रतिशतबारे डा. प्रकाश बुढाथोकीसँग क्यानडानेपालकर्मी पूजा श्रेष्ठले गरेको भिडिओ कुराकानी :
बैशाख ५, २०७८ आइतवार १४:३०:१२ बजे : प्रकाशित
# मुखको क्यान्सर
# डा. प्रकाश बुढाथोकी
निषेधाज्ञा जेठ ३१ गते सम्म थप, किराना र पुस्तक पसल खोल्न पाइने
काठमाडौँ। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले जारी निषेधज्ञा जेठ ३१ गते सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । निषेधाज्ञाको अवधि जेठ ३१ गते सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले गोजानकारी दिए ।
जेठ १९, २०७८ बुधवार १३:४७:५० बजे : प्रकाशित
# किराना र पुस्तक पसल
थप २६३६ जनामा कोरोना संक्रमण, २० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ६३६ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार अपरान्ह दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको कूल ११ हजार ७४८ परीक्षणमा २ हजार ६३६ जनामा कोरोनाभाइरस पोजेटिभ देखिएको हो ।
मन्त्रालयकाअनुसार ७,२५९ जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा १ हजार ७२८ र ४ हजार ४८९ एन्टिजेन परीक्षणमा ९०८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ४८९ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएको छन् भने सोही अवधिमा २० जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
आषाढ १५, २०७८ मंगलवार १७:१३:२७ बजे : प्रकाशित
परीक्षार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइदिन मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । सरकारले परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप लगाइदिन निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार त्रिविलगायत विश्वविद्यालयस्तरका विभिन्न तहको परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिन सातै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र मुलुकभरका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार प्रवेश पत्रका देखाएपछि परीक्षार्थीलाई एस्ट्राजेनेका वा भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाइदिन भनिएको छ ।
श्रावण २७, २०७८ बुधवार १८:२८:२५ बजे : प्रकाशित